ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: November 2009
ဘလော့ဂ်မရေးဖြစ်တာ ကြာသွားပြီ။ မရေးဖြစ်ရုံမက မြန်မာဘလော့ဂ်တွေပါ သိပ်မဖတ်ဖြစ်ဘူး။ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်တောင် ကိုယ်မဝင်ဖြစ်ဘူး။ ဧရာဝတီအွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းနဲ့ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေဘလော့ဂ်မှာ တက်လာတဲ့ လင့်ခ်တွေထဲက စိတ်ဝင်စားရာ တချို့တလေကိုသာ ဖတ်ဖြစ်တယ်။
အခု ရုံးသုံးရက် ပိတ်တာနဲ့ ဘလော့ဂ်ရေးတော့မယ် စိတ်ကူးပြီး ဘလော့ဂ်ဝင်လိုက်တော့ “မောင်သတိ”ရဲ့ ကွန်မင့်နဲ့ တိုးတော့တာပါပဲ။ မောင်သတိဆိုတာကို စာဖတ်သူများသိအောင် မိတ်ဆက်ပေးရရင် နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကျနော့်ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွေမှာ လာရောက်ဖတ်ရှုရင်း မှတ်ချက်ရှည်ရှည် ရေးပေးတတ်သူပါ။ အခုလည်း မောင်သတိက ရှေ့က ပို့စ် (“သိက္ခာရှိခြင်း၊ မရှိခြင်း” ) မှာ တင်ထားတဲ့ သူ့ရဲ့ ကွန်မင့်ရှည်ကြီးတခုတည်း ကွက်ပြီး ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အတွက် “System က တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုင် ကြောင်ပြီး ပျက်သွားတယ်ထင်တယ်”လို့ ဒုတိယမြောက်မှတ်ချက် ပေးထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူ့ကွန်မင့်ကို ကျနော်ဖျက်ပစ်တယ်ထင်လို့ “ခနဲ့” ထားဟန် တူပါတယ်။
ခက်တာက ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဘလော့ဂ် မဝင်တာကြာပြီဆိုတော့ သူ့ကွန်မင့်ပျောက်နေတာကို အခုမှ သတိထားမိတယ်။ ဒီတော့ ကျနော့်ရဲ့ ပထမဦးဆုံး တုန့်ပြန်မှုကတော့ ဂူဂယ်အကောင့်ပတ်စ်ဝါ့ဒ်ကို အမြန်ပြေးပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ တစုံတယောက်များ ဝင်နှောက်လေသလား စိုးရိမ်လို့ပါ။
ဒါပေမယ့် ဂျီမေးလ်ထဲမှာ ပေါ်တဲ့ ကွန်မင့်တွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါ သူ့ကွန်မင့်နဲ့အတူ အခြားသူ နှစ်ယောက်ရဲ့ ကွန်မင့်တွေပါ ပျောက်ဆုံးနေတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ကာလအတန်ကြာတုန်းကလည်း ကျနော့်ဘလော့ဂ်မှာ “မောင်လမ်းသစ်”ဆိုတဲ့ စာဖတ်သူတယောက်ရဲ့ ကွန်မင့်တွေ အခုလိုပဲ ပျောက်ဆုံးဖူးပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ပိုထူးဆန်းပါတယ်။
မောင်လမ်းသစ်က Open ID နဲ့ ကွန်မင့်ရေးသူပါ။ ဒီတော့ သူ့မှတ်ချက်ကို သူပြန်ဖျက်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ Google ID နဲ့ ဝင်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ သူတို့မှတ်ချက် သူတို့ကိုယ်တိုင် ပြန်ဖျက်လို့ ရပါတယ်။ ကွန်မင့်ရေးသူကိုယ်တိုင် ရေးပြီးသားမှတ်ချက်ကို ပြန်ဖျက်ခဲ့တဲ့ အခါမျိုးမှာ “This post has been removed by the author. ” ဆိုတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျတခု ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဘလော့ဂ်ပိုင်ရှင်က စာဖတ်သူရဲ့ မှတ်ချက်ကို ဖျက်မယ်ဆိုရင် “This post has been removed byablog administrator. ” လို့ ပေါ်ပါတယ်။ ဘလော့ဂ်ပိုင်ရှင်က အပြီးတိုင် ပယ်ဖျက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီစာတန်းလည်း မပေါ်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မောင်လမ်းသစ်ရဲ့ ကွန်မင့်တွေ ပျောက်ဆုံးသွားတုန်းက “This post has been removed by the author. ” ဆိုတဲ့ စာတန်းကျန်ခဲ့တဲ့အတွက် ဘယ်လိုဖြစ်သလဲဆိုတာ စဉ်းစားလို့ မရအောင် ရှိခဲ့ပါတယ်။
အခုလည်း မောင်သတိ နဲ့ အခြားနှစ်ယောက်ရဲ့ မှတ်ချက်တွေကို ကျနော်မဖျက်ပါဘူး။ မောင်သတိနဲ့ မောင်လမ်းသစ်နှစ်ယောက်စလုံးဟာ ကျနော်နဲ့ အမြင်မတူတာမှန်ပေမယ့် သူတို့အမြင်ကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ရေးနေသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော့်အနေနဲ့ သူတို့ မှတ်ချက်ကို ဖျက်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဒီတခါ မှတ်ချက်တွေ ပျောက်သွားတဲ့အခါ ဘာသဲလွန်စမှ မကျန်ရစ်ခဲ့ဘူး။ ဒီတော့ ကျနော်ဖျက်ပစ်တယ်လို့ မောင်သတိအနေနဲ့ ထင်တာလည်း သူမလွန်ပါဘူး။
ကာယကံရှင် ကျနော်ကလည်း မဖျက်တော့ ဒီနေရာမှာ တော်တော်လေး ဦးနှောက်ခြောက်သွားပါတယ်။ ဒါနဲ့ အင်တာနက်မှာ လိုက်ရှာကြည့်ရတယ်။ သူများဘလော့ဂ်တွေမှာ ရေးထားခဲ့တဲ့ ကွန်မင့်တွေကို လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားအောင် ဖျက်လို့ရမရဆိုတဲ့အကြောင်း။ ယာဟူးအမေးအဖြေကဏ္ဍမှာ ဖြေထားပုံအရကတော့ ဖျက်လို့ မရဘူးတဲ့။ အက်ဒမင် (သို့မဟုတ်) ဘလော့ဂါဆီကို စာရေးပြီး ဖျက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုမှ ရသတဲ့။
ဒါနဲ့ နောက်တဆင့်တက်လို့ Missing comments ဆိုပြီး ဂူဂယ်မှာ ရှာကြည့်တဲ့အခါကျမှ ဒီလို မှတ်ချက်တွေ ပျောက်ဆုံးနေတာ ကိုယ်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိရတော့တယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒီလိုပဲ မှတ်ချက်တွေ ပျောက်ကြတယ်ဆိုတာ ဘလော့ဂါဖိုရမ်တခုမှာ ဆွေးနွေးထားတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ မောင်သတိတို့ မှတ်ချက်တွေ ပျောက်သွားတဲ့ အချိန်နဲ့ အတူတူလောက်ပဲ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင် မောင်သတိအပါအဝင် အရင်ပို့စ်က မှတ်ချက်ပျောက်သွားသူတွေအားလုံး ကျေနပ်လောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ ပျောက်သွားတဲ့ မှတ်ချက်တွေအားလုံး ကျနော့် ဂျီမေးလ်ထဲမှာ ကျန်နေသေးတဲ့အတွက် ဒီရုံးပိတ်ရက်အတွင်း အားလုံးပေါင်းပြီး သက်ဆိုင်ရာပို့စ်က မှတ်ချက်ကဏ္ဍမှာ ပြန်တင်ပေးပါ့မယ်။
Posted by ကိုပေါ on Friday, November 27, 2009
Labels: about my blog Comments: (14)
"Means and ends are convertible terms." (M.K.Gandhi)
However noble the goal may be, it is justified only when attained by noble means.
S. Arya (15-11-09)
အပေါ်က စာသားတွေကတော့ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းများရဲ့ နှစ်ပတ်လည် ဆရာကန်တော့ပွဲအတွက် ဦးအာရ်ယား လို့ အမည်ရတဲ့ ဆရာကြီးတယောက်က အမှတ်တရ ရေးသားပေးတဲ့ သြဝါဒ စကားပါ။ သူ့သြဝါဒကို မြန်မာလို ဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုရင်….
“ ပန်းတိုင်က မည်မျှပင် မွန်မြတ်သည်ဖြစ်စေ မွန်မြတ်သောနည်းလမ်းဖြင့် ရယူနိုင်မှသာ မှန်ကန်မျှတသည်ဟု (တရားသဖြင့် ရယူသည်ဟု) ဆိုနိုင်ပေသည်”
အဲဒီ သြဝါဒကို ဖတ်ရတော့ ကျနော်အင်မတန် နှစ်သက်မိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကစလို့ ဒီအတွေးအခေါ် အယူအဆကို ကျနော့်အနေနဲ့ တောက်လျှောက် နှစ်သက်လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အရင်လထဲက “ညောင်သီးကိုသာ စားရပါလိမ့်” ဆိုတဲ့ ပို့စ်တခုမှာတောင် ဒီအယူအဆကို ထည့်သွင်းရေးသားဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အခုတလော ထွက်ပေါ်လာတဲ့ သတင်းတွေထဲက သတင်းတခုဟာ အင်မတန် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ စစ်အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့နဲ့ တွေ့ခွင့်ပေးတာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ငြင်းပယ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းပါ။ ငြင်းပယ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့ စီအီးစီတဖွဲ့လုံးနဲ့ တွေ့ခွင့်ပြုတဲ့ အထဲမှာ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ သူရဦးတင်ဦးကို စစ်အစိုးရက ချန်လှပ်ထားခဲ့တဲ့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ငြင်းပယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဦးဝင်းတင်နဲ့ ဗွီအိုအေနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာ ဦးဝင်းတင်က အကျယ်တဝင့် ထောက်ခံပြောကြားသွားပါတယ်။ ကျနော့်အနေနဲ့လည်း ဦးဝင်းတင်နဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ သဘောရပါတယ်။ ဦးဝင်းတင်ရဲ့ စကားအချို့ကို ဒီမှာ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
“ကျနော့်သဘော ပြောရရင် ကျနော်က ဒေါ်စုနဲ့ မတွေ့တာလည်း နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ပြီ။ ကျနော် အကြာဆုံးပေါ့ဗျာ၊ မတွေ့တဲ့လူထဲမှာ။ ဦးတင်ဦးနဲ့လည်း နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ပြီ၊ မတွေ့ရဘူး။ အဲတော့ ဒီပုဂ္ဂိုလ် ၂ ယောက်နဲ့ ကျနော် မတွေ့လိုက်ရတဲ့ အတွက်တော့ ကျနော့်အဖို့ကတော့ အများကြီးကို စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာ ကိစ္စပဲ။ သို့သော် ဒေါ်စုလုပ်တာ Morally မှန်တယ်ဗျ၊ ဒီလိုလုပ်ရမယ်။
“ဆိုပါတော့ဗျာ၊ NLD မှာ ကျနော်နဲ့ ဦးခင်မောင်ဆွေဆိုရင် စစ်အစိုးရက တရားဝင် CEC မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး အမြဲတမ်း ပယ်ပယ်ချတယ်။ ဂမ်ဘာရီနဲ့ခေါ်တယ်၊ ကျနော်တို့ မပါဘူး။ မစ္စတာဘန်ကီမွန်းနဲ့ တွေ့တယ်၊ ကျနော်တို့ မပါဘူး။ ဂျင်မ်ဝက်ဘ်နဲ့ တွေ့တယ်၊ ကျနော်တို့ မပါဘူး။ ကျနော်တို့ စစ်အစိုးရလုပ်တိုင်း ခံခဲ့ရတာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ နေရာတိုင်းမှာ ကျနော်က ငုံ့မခံနိုင်ဘူး။ သည်းညည်းခံတာက တမျိုးဗျာ၊ ငုံ့မခံနိုင်ဘူး။ ဒေါ်စုလုပ်တာ ကျနော် ထောက်ခံတယ်။ ဒါ နည်းကိုယူရမယ့်ကိစ္စ ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော် ပြောချင်တယ်။”
ဒီနေရာမှာ အကျိုးရလဒ်ပဓာနဝါဒီတွေကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ ပေးသလောက်အခွင့်အရေးနဲ့ ကျေနပ်သင့်တယ်လို့ ပြောကြမှာပါဘဲ။ အလုပ်ဖြစ်ဖို့က ပဓာနလို့လည်း ယူဆကောင်း ယူဆကြလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးဝင်းတင်တို့ဟာ နည်းလမ်းမကျဘူးလို့ သူတို့ ယူဆတဲ့ ကိစ္စတရပ်မှာ ဘယ်လောက်အခွင့်အရေးပေးပေး အူယားဖားယား ပြေးယူမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သတိထားစေလိုပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ချိုးဖောက်လေ့မရှိဘဲ အစဉ်သဖြင့် နည်းလမ်းတကျသာ ပြုမူဆောင်ရွက်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာ ဦးဝင်းတင်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှစ်ယောက်ကို အင်မတန် သဘောကျပါတယ်။ သံမဏိစည်းကမ်းပိုင်ရှင်တွေပဲ။ “ရဟန်းမစားရသော ဆွမ်းတနပ်” ဇာတ်ကားထဲက မိမိအသက်နဲ့လဲပြီး ဝိနည်းကို စောင့်ထိန်းတဲ့ ရဟန်းလိုပါပဲ။ (ဒီအကြောင်းကိုလည်း ရှေ့မှာ ပို့စ်တခု ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။)
အနှစ်ချုပ်ရရင် လောကကြီးမှာ ကြီးကျယ်မွန်မြတ်တဲ့သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ သံမဏိစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ချိုးဖျက်လေ့မရှိကြဘူး။ မွန်မြတ်တဲ့အရာကို ရယူတဲ့နေရာမှာ မှန်ကန်တဲ့၊ မွန်မြတ်တဲ့ တရားသဖြင့် နည်းလမ်းတွေကိုသာ ကျင့်သုံးကြတယ်။ ဒီလို ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့ အကျင့်ကို ရွေးချယ်ကျင့်သုံးတဲ့ လူတွေကို အစွန်းရောက်တယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ သူတို့ဟာ အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်ကို အမှန်တကယ် ကျင့်သုံးနေသူတွေသာ ဖြစ်တယ်။
တကယ်တော့ ဒီအလေ့အထ(ကျင့်စဉ်)နဲ့ ပတ်သက်လို့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော်ကတည်းက ဗုဒ္ဓကလည်း ဟောခဲ့ပြီးသားပါ။ သစ္စာလေးပါးမှာ နောက်ဆုံးတရားဖြစ်တဲ့ မဂ္ဂသစ္စာဟာ ဒုက္ခ၏ ချုပ်ငြိမ်းရာ နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ကြောင်းအကျင့်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ဒီကျင့်စဉ်မှာ ပါဝင်တဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ လမ်းရှစ်သွယ် (Noble eightfold path)ကတော့…. (ကိုးကားချက်။)
(၁) သမ္မာဒိဋ္ဌိ - ကောင်းစွာသိမြင်ခြင်း (right view)
(၂) သမ္မာသင်္ကပ္ပ - ကောင်းစွာ ကြံစည်ခြင်း (Right thought)
(၃) သမ္မာဝါစာ- ကောင်းစွာ ပြောဆိုခြင်း (Right speech)
(၄)သမ္မာကမ္မန္တ- ကောင်းစွာ ပြုမူနေထိုင်ခြင်း (Right action)
(၅)သမ္မာအာဇီဝ- ကောင်းစွာ အသက်မွေးခြင်း (Right livelihood)
(၆) သမ္မာဝါယာမ- ကောင်းစွာ အားထုတ်ခြင်း (Right effort)
(၇)သမ္မာသတိ - ကောင်းစွာ ဆင်ခြင်အောက်မေ့ခြင်း (Right mindfulness)
(၈)သမ္မာသမာဓိ - ကောင်းစွာ တည်ကြည်ခြင်း (Right concentration) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးကိုမှ အစုသုံးစု ထပ်ခွဲလို့ ရပါသေးသတဲ့။ ပညာ၊ သိက္ခာ နဲ့ သမာဓိဆိုတဲ့ အစု သုံးစုဖြစ်ပါသတဲ့။ ပညာအစုမှာ ပါတဲ့ လမ်းနှစ်သွယ်ကတော့ ကောင်းစွာ သိမြင်ခြင်းနဲ့ ကောင်းစွာ ကြံစည်ခြင်းတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒုတိယ အစုဖြစ်တဲ့ သိက္ခာအစုမှာတော့ ကောင်းစွာပြောဆိုခြင်း၊ ကောင်းစွာပြုမူနေထိုင်ခြင်း၊ ကောင်းစွာအသက်မွေးခြင်းဆိုတဲ့ ကျင့်စဉ်သုံးမျိုး ပါဝင်ကြသတဲ့။ နောက်ဆုံး သမာဓိအစုမှာတော့ ကောင်းစွာ အားထုတ်ခြင်း၊ ကောင်းစွာဆင်ခြင်အောက်မေ့ခြင်းနဲ့ ကောင်းစွာ တည်ကြည်ခြင်းဆိုတဲ့ စူးစိုက်ခြင်း သုံးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ဆက်စပ်စဉ်းစားရင် လောကီကိစ္စတော်တော်များများမှာ လူတွေဟာ ဘယ်ဟာမှန်တယ်၊ ဘယ်ဟာမှားတယ်ဆိုတာကို အတော်အတန် ခွဲခြားသိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမှန်ကိုသိတာက တခြား။ လက်တွေ့ကျင့်ကြံတာက တခြားပါ။ ဒါကြောင့်လည်း “မရှိတာထက် မသိတာခက်၊ မသိတာထက် မလုပ်တာခက်” လို့ ယောမင်းကြီးဦးဖိုးလှိုင်က ပြောခဲ့တာပါ။
သိက္ခာအစုမှာပါတဲ့ ကျင့်စဉ်တွေဖြစ်တဲ့ ကောင်းစွာပြောဆိုခြင်း၊ ကေင်းစွာပြုမူနေထိုင်ခြင်း၊ ကောင်းစွာ အသက်မွေးခြင်းဆိုတဲ့ အကျင့်တွေကို တသွေမသိမ်း လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြသူတွေဟာ သိက္ခာကြီးမားတဲ့ လူတွေ ဖြစ်လာတတ်ကြပါတယ်။
ဦးဝင်းတင်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးမှာ အင်မတန် သိက္ခာကြီးမားသူတွေ ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာ အားလုံးအသိပါ။ ကမ္ဘာတလွှားက လေးစားကြရသူတွေပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ အမှုတွေကို သိမြင်ရုံမက အဲဒီအတိုင်းလည်း တသွေမတိမ်း ပြုမူပြောဆို နေထိုင်သူတွေ ဖြစ်ကြလို့ပါ။ ဒီနေရာမှာ အမှန်ကို သိပေမယ့် အလုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း(principles)တွေနဲ့ အလဲအလှယ် (trade off) လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ရလဒ်ပဓာနဝါဒီတွေနဲ့ သိက္ခာကြီးမားသူတွေအကြား ခြားနားပုံကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။
မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးကျင့်စဉ်ကို ဗုဒ္ဓက အလယ်အလတ်ကျင့်စဉ်ရယ်လို့ ညွှန်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်း ကျင့်သုံးနေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ဦးဝင်းတင်တို့ဟာ အစွန်းရောက်သူတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ အလယ်အလတ် လမ်းစဉ်ကို အမှန်တကယ် ကျင့်သုံးနေကြသူတွေသာ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ဘယ်သူတွေက အစွန်းရောက်သူတွေလဲ။
နအဖ စစ်အစိုးရကတော့ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးရဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်မှန်သမျှကို လုပ်ဆောင်နေသူတွေဆိုတော့ သူတို့ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ဦးဝင်းတင်တို့ရဲ့ ဟိုးတခြားတဖက် မှာရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ အများသိကြပြီး အချက်ပါ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးလည်း မြင်သာပါတယ်။ အထူးပြောဖို့မလိုပါဘူး။
ပြောဖို့လိုတာက လက်တွေ့ကျတဲ့ (အလုပ်ဖြစ်မယ့်) လမ်းစဉ်ကိုလိုက်တယ်ပြောပြီး မိမိရဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို အခွင့်အရေးနဲ့ လဲလှယ်ချင်သူတွေ အကြောင်းကိုပါ။ ထိုသူများအဖို့ သူတို့ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့လောက်လည်း အစွန်းမရောက်ဘူး၊ နအဖလောက်လည်း တဖက်စွန်းမရောက်ဘူး။ ဒါကြောင့် သူတို့သာလျှင် အလယ်အလတ် လမ်းစဉ်ကို ကျင့်သုံးသူတွေ၊ သဘောထားပျော့ပြောင်းသူတွေ၊ လက်တွေ့ကျသူတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆ ပြောဆိုတတ်ကြတယ်။
တကယ်တော့ အမှားနဲ့ အမှန်ကြားမှာ ဝင်ရပ်လိုက်ရုံနဲ့ “အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်ကျင့်သုံးသူ” အဖြစ်ကို အလိုအလျောက် ရောက်သွားတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်တရားက ဒီဖက်အစွန်းတခုမှာရှိတယ်၊ အမှားက အခြားတဖက်စွန်းမှာ ရှိတယ် ဆိုပါစို့။ အဲဒီကြားမှာ ဝင်ရပ်တဲ့သူဟာ သိပ်မမှန်တဲ့လူပဲ ဖြစ်လာစရာအကြောင်းရှိပါတယ်။ အမှန်တရားကို လက်ကိုင်ထားသူ ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ အလားတူပဲ ကောင်းတဲ့အစွန်းနဲ့ မကောင်းတဲ့အစွန်း၊ တရားမျှတမှုနဲ့ မတရားမှု၊ ဓမ္မနဲ့ အဓမ္မ….. ဒီကိစ္စအားလုံးမှာ ကြားထဲက ဟိုမရောက်ဒီမရောက် နေပြရုံနဲ့ ကောင်းတဲ့လူ၊ တရားမျှတသူ၊ ဓမ္မကို လက်ကိုင်ထားသူ ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ ဟိုမရောက် ဒီမရောက်တွေပဲ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ နောက်တခုက လက်တွေ့ကျကျလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ ကြွေးကြော်ပြီး အမှန်ကို သိပါလျက်နဲ့ အမှန်အတိုင်းလုပ်ဖို့ ဝန်လေးသူတွေဟာ သိက္ခာအစုမှာ ပါဝင်တဲ့ ကျင့်စဉ်တွေကို လက်တွေ့မကျင့်သုံးတဲ့အတွက် သိက္ခာမရှိသူတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့် ဘယ်အရာကို လုပ်လုပ် မှန်ကန်တဲ့၊ တရားမျှတတဲ့၊ ကောင်းသောစိတ်နဲ့ယှဉ်တဲ့ အမှုမျိုးကိုသာ ပြုသင့်ပါတယ်။ ကောင်းတာဖြစ်ဖို့ ဘာလုပ်လုပ်တရားတယ်ဆိုတဲ့ စကားဟာ မှားယွင်းပါတယ်။ တရားတာကို လုပ်မှ တရားသဖြင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ဆရာကြီး ဦး Arya ရဲ့ စကားနဲ့ပဲ ဒီပို့စ်ကို နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။
“However noble the goal may be, it is justified only when attained by noble means. ”
Posted by ကိုပေါ on Sunday, November 8, 2009
Labels: Thoughts Comments: (32)
“Burma VJ - Myanmar through the lens”
လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက် နဲ့ ၁၁ ရက်နေ့များမှာ “Burma VJ – Myanmar through the lens” ကို တရက်တကြိမ် အခမဲ့ ပြသပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ ဘားမားဗီဂျေ ရုပ်ရှင်ကို စင်္ကာပူမှာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ထပ်မံပြသခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လထဲတုန်းက စင်္ကာပူ မြို့လယ်ခေါင် Raffles Hotel ရဲ့ လူ ၄၈၀ လောက် ဆန့်တဲ့ ဂျူဗလီဟောလ်မှာ Burma VJ ကို ပထမအကြိမ် ပြသခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ညနေ ၆ နာရီခွဲလောက်မှာ ကျနော်တို့ ရောက်သွားတော့ ရုံထဲကိုဝင်ဖို့ တန်းစီနေတဲ့ ပရိသတ်ကြီးက မြွေလိမ်မြွေကောက် တွန့်လိမ် ရှည်လျားနေပါပြီ။ ကျနော်တို့လည်း အပြေးအလွှား ဝင်ရောက်တန်းစီပြီး ကံကောင်းထောက်မစွာ ကြည့်ရှုခွင့်ရလိုက်ပေမယ့် အဲဒီနေ့က လာရောက်ကြသူအရေအတွက် ထက်ဝက်နီးပါးကတော့ ရုံမဆန့်လို့ ပြန်သွားကြရပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ကျနော့်အသိမိတ်ဆွေ တော်တော်များများလည်း ပါသွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် မကြည့်လိုက်ရတဲ့ မြန်မာမိတ်ဆွေများက ဒီတခါ စင်္ကာပူမှာ Burma VJ ကို ထပ်မံပြသခဲ့ရင် အသိပေးပါလို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီတခါတော့ နှစ်ရက်ဆက်တိုက် တရက်တပွဲ ပြသမှာမို့ မကြည့်လိုက်ရသေးတဲ့ မြန်မာများအတွက် သတင်းကောင်းပါ။ အီးမေးလ်နဲ့ ကြိုတင်ပြီး Register လုပ်ထားဖို့တော့ လိုပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ဒီမှာ သွားကြည့်ပါ။ ( http://maruah.org/myanmarlens/ )
ဒီလို ပြသခွင့်ရဖို့ ကမကထပြု ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ အဖွဲ့ကတော့ Maruah Singapore အဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ Maruah Singapore အဖွဲ့ဟာ အာဆီယံ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ စည်းရုံးလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားအချို့ရဲ့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ဟာ မြန်မာ့အရေးနဲ့လည်း သိပ်မစိမ်းလှပါဘူး။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလထဲကလည်း “Burma On My Mind” ဆိုတဲ့ လှုံ့ဆော်မှုအစီအစဉ်လေးကို ပြုလုပ်ခဲ့သလို ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လတုန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် စင်္ကာပူနိုင်ငံ စပီကာကော်နာမှာ စုဝေးလှုပ်ရှားမှုတရပ် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလှုပ်ရှားမှုလေးတွေကို ကျနော့်ဘလော့ဂ်မှာ "Burma On My Mind" နဲ့ “Free Aung San Suu Kyi now” စတဲ့ ပို့စ်ကလေးတွေနဲ့ အမှတ်တရ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။
ဘားမားဗီဂျေ ရုပ်ရှင်ကားနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ကျနော့်အနေနဲ့ အထူးတလည် ရေးသားမပြတော့ဘဲ စင်္ကာပူနိုင်ငံသား ဂျာနယ်လစ် Alex Au ချီးကျူးရေးသားထားတဲ့ ဆောင်းပါး ကိုသာ တဆင့်ညွှန်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
Posted by ကိုပေါ on Thursday, November 5, 2009
Labels: event Comments: (6)